Kuparidza Kunoenderera muDominican Republic | Bhuku Regore ra2015
Mamishinari Anoramba Achiparidza Pachivande
Kubhanwa kwakaitwa basa rekuparidza kwaiva kutanga kwenguva yakaoma zvikuru kuZvapupu. Mumishinari anonzi Alma Parson anoti, ‘Dzimba dzeUmambo dzakavharwa uye basa redu rekuparidza rakarambidzwa. Hama dzedu dzaiva ikoko dzakatarisana nemiedzo uye matambudziko akawanda.’ Hama dzakapererwa nemabasa uye dzakaiswa mumajeri. Zvisinei, anoti: ‘Kakawanda tainyatsoona kudzivirira uye kutungamirira kwaJehovha.’ Hama dzakakwanisa kuramba dzichiita basa rekuparidza pachivande nekuti dzaivimba ‘nekutungamirira kwaJehovha.’
Tairambidzwa kuita misangano yeungano. Lennart Johnson anoti: ‘Hama dzakatanga kuita misangano pachivande mumapoka madiki mudzimba dzehama. Taidzidza nyaya dzemuNharireyomurindi dzaiita zvekudhindwa nemimeograph, muchina wakaita setapureta. Vose vainge vakavimbika vakakoshesa chaizvo kusimbiswa kwataigara tichiitwa naJehovha tiri mumapoka aya.’
Roy naJuanita Brandt vaiva vamwe vevakaramba vachiita basa panguva yarainge rakabhanwa
Panguva iyoyo hurumende yakawedzera kushungurudza uye kuongorora Zvapupu. Asi hama nehanzvadzi hadzina kutya izvozvo. Musi wa15 September 1950, Munyori anonzi Hungría, akanyorera Purezidhendi wenyika yacho achiti: “Mr. Lee Roy Brandt nevamwe vatungamiriri veboka reZvapupu zvaJehovha vakashevedzwa vashevedzwazve kuhofisi ino vachinyeverwa kuti vasaramba vachitaura nhema dzesangano ravo iro rakabhanwa zviri pamutemo munyika ino; asi vari kuramba vachiomesa musoro. Zuva nezuva tiri kunzwa mashoko kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana kuti vari kuramba vachitaura nhema dzavo pachivande, vachishora zvinoitwa nehurumende.” Tsamba yacho yakapedzisira nekuti “vatungamiriri vanobva kune dzimwe nyika” veZvapupu zvaJehovha vabudiswe muDominican Republic.
‘Kuvapo Kwavo Kwakavasimbisa’
Gore ra1950 rava kunopera, Hama Knorr naHama Henschel vakashanyira Dominican Republic. Pashure pacho, mamwe mamishinari aivamo akatumirwa kuti anoshumira ari kuArgentina, Guatemala, nePuerto Rico. Vamwe vakapinda mabasa kuitira kuti varambe vachigara munyika yacho. Somuenzaniso, Hama Brandt vakapinda basa pakambani yemagetsi, uye vamwe vaidzidzisa Chirungu. Bhuku Regore ra1951 reChirungu rakataura nezvemamishinari aya richiti: “Kuvapo kwawo munyika yacho, asingatizi, kuri kusimbisa vateveri vakatendeka vaIshe avo vakadzidziswa chokwadi nemamishinari. Vose vari kufadzwa nekuona ushingi hwaari kuratidza nokuramba achiita basa rawo.”
‘Kuvapo kwavo kwakasimbisa vakatendeka’
Dorothy Lawrence aiva mumwe wemamishinari aidzidzisa Chirungu. Uye vamwe vaifarira chokwadi vaaidzidzisa Chirungu aivadzidzisawo Bhaibheri. Izvi zvakaita kuti akwanise kubatsira vakawanda kuwana chokwadi.
Vanhu vaJehovha vakavimbika vane zvimwe zvavakaita kuti varambe vachiita basa remumunda panguva yavaiongororwa. Pamwe pacho vaibvisa mapeji mumabhuku votakura mashoma muhomwe yesheti kana kuti mubhegi remagirosari kuti vaparidze vasingaonekwi kuti ndizvo zvavari kuita. Pepa remushumo webasa romumunda rainge rakagadzirwa kuti riite sepepa rakanyorwa mazita ezvekudya. Pane kunyorwa kuti mabhuku, tubhuku, magazini, kudzokerera, uye maawa, rainge rakanyorwa kuti mapopo, bhinzi, mazai, makabheji uye sipinachi. Magazini eNharireyomurindi ayo aiita zvekudhindwa nemuchina wakaita setapureta aishevedzwa kuti yuca, zita rakabva pamufarinya, chirimwa chinonyanya kuwanika munharaunda yacho.
“Pepa rakanyorwa mazita ezvekudya”
Lechosas (mapopo) = mabhuku
Frijoles (bhinzi) = tubhuku
Huevos (mazai) = magazini
Repollos (makabheji) = kudzokerera
Espinacas (sipinachi) = maawa
Basa Rekuita Kuti Vanhu Vave Vadzidzi Rinoenderera Mberi
Musi wa16 June 1954, Rafael Trujillo akasainirana naPapa chibvumirano chaipa vafundisi vechechi yeRoma vemuDominican Republic mvumo yekuita zvimwe zvinhu zvaisaitwa nevamwe. Panguva iyi, basa reZvapupu rakanga ratova nemakore mana rabhanwa. Zvisinei, pakasvika 1955 muDominican Republic makanga mava nevaparidzi 478. Zvakafamba sei kuti Zvapupu zviwedzere pasinei nekuoma kwezvinhu? “Mudzimu waJehovha ndiwo unotipa simba,” rakadaro Bhuku Regore ra1956 reChirungu. “Hama dzakabatana uye dzakasimba pakutenda uye dzinofambira mberi dzakashinga.”
Muna July 1955, tsamba yaiva nechidhindo yakabva kumahofisi edu makuru yakatumirwa kuna Trujillo. Tsamba yacho yainyatsotsanangura kuti Zvapupu zvaJehovha hazvina divi razvinotsigira uye yaikumbira Trujillo kuti ‘abvise kubhanwa kwebasa reZvapupu zvaJehovha uye kwesangano reWatch Tower Bible and Tract Society.’ Zvakaguma nei?